Isimemezelo esibhekene nesiphathimandla samaphoyisa endaweni yaseRomy nase-Savannah: uMartin Vrijland
Nakuba ngempela amaphoyisa ngokuhlanganyela nabezindaba anikele ngokuhle kunakho konke Romy futhi Savannah izimpendulo zabo obonakalayo Romy futhi Savannah ndaba futhi ikakhulukazi umbono wokuthi izinto kwafana ixazululwe, lena ngokuphelele akunjalo. Umfana owayengababulala uRomy Nieuwburg waziwa abezindaba wabe esefika indaba lapho isithombe somfana we-psychopathic siswa phansi. Yindaba ebhalwe ngesitayela se-NLP, lapho kungekho khona ubufakazi obuhlinzekwa khona. Ummangalelwa eS Savannah Dekker uzobe esesithombeni sezinkampani zokuphepha, kodwa uma ugcwalisa izithombe ezihlanganisiwe bonisa emithonjeni yezindaba futhi uhlanganisa ukuthi ngezindaba ze-NLP, wazi ukuthi iningi lezilaleli likholelwa. Ngaphandle kwezithombe (ezingakholeki), indaba ibonakala ingakholeki ngokuphelele. Esimweni ngasinye, zombili izindaba zilethwa abezindaba ngokuzimela, ukuze kugcinwe ukuthi izinto azihlangene nomunye nomunye. Lokhu akunangqondo, ngoba uma 1 intombazane emhlabeni 17: 00 lokuqala ntambama kutholakala efile futhi omunye abakatholakali ngaleso sikhathi, ukuthi esanele sokuba isaziso inhlaka usesho omkhulu ngendiza enophephela emhlane sniffer izinja. Iphikisana lokuthi amaphoyisa angeke azi ukuthi kufanele abukeke kuphi, ngoba ngaso sonke isikhathi kukhona okukhethwa ngokuqondile kwemicibisholo yocingo. Kusukela emgqeni wezindaba kumaphephandaba manje sekucacile ukuthi uzobe naye.
Njengoba kukhona kakade eminyakeni embalwa kuyinto enzima nasibawu abezindaba abazimele kanye abezindaba abazimele okunye, nje uya ukuphenya kanye ngoba lowo muntu, ukubhala ngaphansi kwegama Martin Vrijland, kodwa ayigcini (naphezu ukunyundela ukusakaza ngamabomu futhi ukunyundela yi-state smith uJeror Hoogeweij kanye nezindawo eziningana ezithatha), kuba nzima ukusabalalisa izindaba ezinjalo ngokungaqondile. Izihloko zikaMartin Vrijland zifundwa ngokushesha izikhathi ezingu-100 000 ngosuku lwe-1 kulolu hlobo lomcimbi. Futhi emva kwezinsuku ezimbalwa eziye zasakaze cishe ingxenye yesihlanu eNetherlands. Lokho kungenxa kungani ngisho Kwabonakala iphoyisa kusukela Hoevelaken iya ku ehlasela omlobi. Wenza kanjalo ngokusho ukuthi ngizokwenza isifungo nokunyundela ngokubhala ngale ndaba. Bheka ngezansi.
Wonke umuntu oye wangilandela okwesikhashana uyazi ukuthi ngise-2013 mayelana Anass Aouragh icala lokubulala libhala futhi lakhetha ngamabomu umlobi womlobi uMartin Vrijland, ngoba ngase ngiqaphele ukuthi kwakukhona inombolo x yamawebhusayithi ahlelekile noma ubani oye wazama ukugxeka inkulumo esemthethweni kumaphephandaba ajwayelekile, yenza indebe encane. Lezi zingosi zikushisa ngokuphelele futhi esimweni sami nazo zenza izingcingo ukuze zithole igama lami langempela. Benza futhi izingcingo zokudlulisela ulwazi olubi ngami kubo. Amasayithi aphonsa lonke i-intanethi igcwele isifungo esingenakuqhathaniswa nokunyundela ekhelini lami futhi ngenza isimemezelo ku-2013. Nakuba ngithumele ifayela elibanzi ngokufakazela ukuhlambalaza nokunyundela ngesikhathi sesimemezelo futhi isimemezelo sangempela sithatha amahora amaningi, angikaze ngizwe ngesimemezelo futhi. Angizange ngithole noma yikuphi ukubhalwa noma enye indlela yokuphendula. Amakholi ocingweni esiteshini samaphoyisa lapho ngifaka khona isikhalazo axoshwa ngamazwana "asengaphansi kokuhlolwa". Nginakho angabonisa ukuthi konke lokhu kuhlambalaza nokunyundela kwavela kumsebenzi kahulumeni uJeren Hoogeweij waze waphinde washicilela ipasipoti yakhe kazwelonke. Akuzange kusize. Akukho okwenzekile ngesimemezelo nanamuhla yonke i-intanethi isalokhu igcwele izindaba ezingenasisekelo. Lokho kunomphumela walo. Akuyona nje eyingozi empilweni yami yangasese, kodwa futhi kusho ukuthi angisoze ngakwazi ukuthola umsebenzi ojwayelekile futhi. Ukusesha kwe-Google kuzomisa masinyane umqashi omusha. Ngaphezu kwalokho, abalandeli abasha besayithi lami basabhekwa nale mibhalo. Ikhasi le-Facebook liye lahlelwa ngisho nalokhu.
Yingakho lokhu okuthunyelwe kwe-Facebook ngumphathi we-Erik Kluinhaar ku-Romy nase-Savannah icala lilayishiwe. I-ejenti inikeza isifungo esingenasisekelo futhi ukunyundela inthanethi, enye impulse eyengeziwe. Nakuba kungenzeki lutho ngesimemezelo esandulele futhi cishe ngeke kwenzeke, ngiyaqhubeka nokulwa nelungelo lokukhulumisana. Nakuba kusekhona ngokusemthethweni eNetherlands, kusobala ukuthi uhulumeni usebenza zonke izinhlobo zezindlela eziyinkimbinkimbi ukwenza wonke umuntu osalindela ukuveza ukugxekwa kancane kancane. Uvele ubangele umonakalo omkhulu kumuntu, ukuze kungabikho muntu ozozama ukusebenzisa ilungelo lokukhulumisana. Ukuphawula kwe-agent Kluinhaar nakho kuyingozi kakhulu, ikakhulukazi ngoba uthi ngiyiqhinga futhi ngiyinyundela. Ngalokhu angikwenzi lutho ngaphandle kokugxila ekuchazeni ngokujulile icala leRomy no-Savannah futhi hhayi ukukhipha noma ukunqoba noma ubani kulo.
Engxoxweni yami yokuqala yocingo namaphoyisa kwabikwa ukuthi angikwazi ukufaka umbiko ngokumelene ne-agent. Ngabe sengikhonza isikhalazo. Kwaze kwaba ngesonto eledlule ukuthi othintana nabo befoni bayenziwa nami. Phakathi naleso ngxoxo kwabikwa ukuthi ngingakwazi ukufaka umbiko noma kunjalo. Ngangikwazi ukubika lesi simemezelo kuleli sonto, kodwa ngangihambisana nombhalo olandelayo:
Kusobala ukuthi kwenziwa umzamo wokunciphisa indaba kancane. Nokho anginandaba nayo sina, ngoba ngikholelwa ukuthi isimo akufanele enze ukuhlambalaza nokunyundela ngokumelene izakhamuzi zawo ukucindezela nenkululeko yokukhuluma nami ngizonitshela ukuthi siqhubeke kokubili leli simemezelo ubudala sina. Yingakho ngiphendula kanje:
Kuhle ntambama nkosi ..,
Ukuhlambalaza nokunyundela umuntu wami kwenziwa ngo-13 Juni 2017 kumasipala waseNijkerk, ku-intanethi ekhasini le-Facebook lommeli womphakathi u-Erik Kluinhaar.
Uzothola ikhophi yalokhu ngaphansi kwalesi sixhumanisi:
Nakuba i-agent engasebenzisi igama lami lesidlaliso 'uMartin Vrijland', kodwa kuphela igama elithi Martin, kucacile ukuthi ukhuluma ngami. Lokhu kubonakala, phakathi kwezinye izinto, kusukela ekuphenduleni kwabo bonke abantu abasabela kulokhu. Ukurekhoda kokuphendula komugqa wesikhathi ngesikhathi kungatholakala kule vidiyo.
Ngokombono wami, obanele ukuthi uzinikela uMnu Kluinhaar ukuhlambalaza nokunyundela, ngoba washo nokuthi mina ukushicilela izihloko agcwele ukuhlambalaza nokunyundela. " Ngale ndlela uyangitshela ngento ethile okungakaze kube khona isinqumo esingokomthetho esivela kuso ukuthi ngenza isifungo nokunyundela. Lokhu kusho ukuthi izihloko zami nomsebenzi wami ngenxa yalokho zilahlwa ngokucophelela ku-Facebook. Ngaphandle kwesahlulelo noma isixwayiso esicacile ekhelini lami, ngizobekwa icala esidlangalaleni sokuthi uhlambalaza nokunyundela. Uma, ngokwesibonelo, ngigwetshiwe ngecala lokunyundela nokunyundela, ngabe ngabe wenze kahle umbiko. Manje lokhu Nokho kwakungenjalo, futhi ngathola isexwayiso noma okubonisa lapho isiqondiso amaphoyisa lwezobulungiswa, kucace kimi ukuthi lokhu (okufana zokuxhumana encwadini) engekho, ukuthi lokhu kuthinta igama lami nedumela.
Ngaphambilini ku-2013 ngithumele imibiko emaphoyiseni we-online libel kanye nokunyundela ekhelini lami ngokumelene nazo zonke izinhlobo zewebhusayithi ezenza lokhu futhi zine-intanethi. Angikaze ngizwe noma yini yalokhu (isimemezelo esicacile kakhulu). Ayikho nencwadi engasho ukuthi lesi simemezelo asikwenziwa. Ngingacabanga ukuthi lokhu akuzange kwenzeke, ngoba ngangingahle ngikwazi ukwenza ukuthi lokhu kuhlambalaza nokunyundela kwavela kumuntu osebenzela uhulumeni kazwelonke. Kodwa lokho akuguquli iqiniso lokuthi lokhu akulungile ngokuphelele. Lesi simemezelo kufanele ukuthi sithathwe futhi sibhekiswe. Ngakho-ke kubonakala sengathi igama lami lingabanjwa esidlangalaleni, ngaphandle kokuphikisana. Mhlawumbe lokhu kungenxa yokuthi ngibhala izihloko ezibucayi 'ezingathandeki' ezilinganiselwe. Lokho akuvimbeli ukuthi ngenxa yokuhlambalaza okunjalo nokunyundela impilo yami yonke yangasese kuthintekile futhi angizange ngithole umsebenzi ojwayelekile emphakathini. Lona umphumela wokuqamba amanga nokunyundela. Ukuthi uMnu. Kluinhaar unikeza ukuphawula okunjalo ukukhulisa okwedlulele kumanje manje idumela elidumile le-inthanethi.
Ngisho noma ukuphawula okuthunyelwe noma okukhulunywe nguMnu Kluinhaar kuye kwaguqulwa noma kususwe, kungashiwo ukuthi lokhu sekukude kwikhompyutha ngokwanele ukulimaza idumela lami. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi lesi simemezelo sibhalwe futhi siphathwe ngokungathí sina.
Umbhalo ongenhla uhanjiswe ekumemezelweni ukuthi ngithumele kumuntu oxhumana naye ngemuva kokusayina. Ngibuye ngithumele ividiyo yomugqa wesikhathi sikaMnu Kluinhaar ngokurekhoda kokuthunyelwe kufaka konke ukuphendula. Ngangizimisele ngokususwa kwalokhu okuthunyelwe noma ukusabela ngezansi. Lezi zindlela ezithintayo nazo zibonakala ziwumsebenzi we-"trolls" ochwepheshe.
Ngakho-ke kubonakala sengathi umbuso usebenzisa izindlela zokuvimbela ukugxekwa kokufundwa okusemthethweni kumaphephandaba, okungaqondile okungafanelekile futhi okulimazayo. Ukuhlambalaza okuzibophezelekile nokunyundela ku-intanethi kunqotshwe ngokuphelele futhi abantu basebenzisa lezi zindaba ezingasekelwa cishe konke okuthunyelwe kwe-Facebook. Lokhu kufanele ngisuse njalo ekusebenziseni komugqa wami wesikhathi, okuyinto ngenhlanhla ukuthi akuwona wonke umuntu obhekana nalezi manga, kodwa ngisho noma abantu behlanganyela okuthile kimi bahlaselwa ngamatheksthi. Isisebenzi isimo kusukela kule Jeroen High Weij (kanye nabasebenzi bayo) zihlakazeke ukuhlambalaza nokunyundela mayelana umuntu wami ngakho linebanga esikhulu kakhulu futhi ibe nomphumela omubi kakhulu. Yingakho kubalulekile ukuthi ngiphinde ngimemezele lesi sikhathi futhi. Lesi sikhathi ngokumelene ne-agent. Ngiyaqhubeka ngilwela iqiniso futhi ngokumelene ne Izindlela zikaMacavavelli abezindaba babonakala basebenzisa.
Ngokuqondile ngoba nginqume ukulwa eminyakeni embalwa eyedlule futhi ngoba konke lokhu ukuhlambalaza nokunyundela kwangiphanga ngokuphelele kokubili ngasese nangokwezimali, ngicela ukuba ungisekele. Lokhu kungenziwa ngokujoyina leli sayithi kusuka ku-€ 2 ngenyanga noma ngokwenza umnikelo wesikhathi esisodwa. Ungagcina zonke izihloko ku-Romy nase-Savannah ngaphansi kwalesi sixhumanisi funda okuqukethwe okuhle futhi, ukuze uqonde ukuthi kungani ngiqhubeka ngibheka leli cala. Kubalulekile ukuthi wenze lokhu, ngoba yisikhathi lapho abantu bengasazivumeli ngezindaba nokuthi okwamanje uhulumeni Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo zonke izinhlobo zomthetho omusha ziqhutshwa, ezithatha izinkululeko eziningi. Leli cala libonakala lihlangabezana nalokhu. Ngakho-ke funda izihloko zakamuva kulokhu. Ngokubaluleke kakhulu ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi abezindaba abakwazi ukuletha lutho ngaphandle kokungaqondakali, kubalulekile ukuthi ukugxeka abantu kuqhubeka kukhona. Naphezu kwakho konke ukuhlambalaza nokunyundela ekhelini lami, ngifuna ukuqhubeka. Ngoba umsindo obucayi uhlala udingekile emphakathini ovulekile; ngoba inkululeko yokukhuluma kufanele ilwe futhi ngoba nawe unelungelo; Yingakho ngicela usizo lwakho. Yiba njalo lapha ilungu kusuka ku-€ 2 ngenyanga noma wenze eyodwa umnikelo wesikhathi esisodwa.
Amathegi: isimemezelo, afakiwe, UJeren Hoogeweij, Ubulungisa, I-Kluinhaar, okokugcina, ukunyundela, UMartin Vrijland, ukubulala, izindaba, ucwaningo, uhulumeni, amaphoyisa, Romy Nieuwburg, Savannah Dekker, amahloni, isimo, umugqa wesikhathi, wabulawa, ummeli womakhelwane, icala
15 July 2017 ku-11: 30
Kuyincoma kuwe, umsebenzi wakho, ukuthi ezinye iziphathimandla zinakekele. Kusho ukuthi wenza umsebenzi obalulekile. Kungenjalo bekungakukhathalela ngokuphelele.
15 July 2017 ku-13: 05
Ngiyabonga. Kufanele silinde futhi sibone ukuthi bazobhekana kanjani nalokhu ...
15 July 2017 ku-18: 08
Kusukela esikhathini sami eNetherlands ngafunda into eyodwa: "Iningi labantu lithula, abantu abambalwa benza isenzo."
20 July 2017 ku-14: 30
"Ngesikhathi esithile noma enkohliso iqiniso liyisenzo sokuguqula" (Isiqu sikaGeorge Orwell)
20 July 2017 ku-15: 49
Kuyinto impendulo evela kuDavid Hoffman mayelana ne-Orwell's 1984 .. ???? Kuhlala njalo kuthiwa umuntu ongalungile ..
15 July 2017 ku-19: 57
Kungase kuthiwa kuyamangalisa, ukuthi izakhamuzi zakanye zikhohliswa yi-ejenti yesifunda.
Kodwa akumelwe sikhohlwe ukuthi abezindaba abantu Rig ukukhashelwa efana DWDD, Jinekshow, Peacock indlovukazi (umhleli sika) ngokuphelele uyazi futhi udlale umdlalo ngakhoke asibandakanyeki ku nomaka inkululeko yabantu kanye journalism.
17 July 2017 ku-11: 12
@Martin futhi @Allen Idonsa zonke lezi noMbusi wababusi musa ngisho acabangele kwezinkambiso zesizotha ngiqale Epistle kwabo Mirrors:
"Sawubona mnumzane" lowo mnumzane useyinto ethize, kodwa awuqali ngoSholwa, Yebo ngiyabonga nje .. :) ???? njll.
Uhlobo luni lomusa ongazange lufunde?
Ayikho manje ubona ezingasho: nezokuziphatha, nokucekelwa futhi Dredging Umtfumbu lokudlela on TV ngenhla, kodwa esengathi ku-intanethi, Faecesbook, Twittwittwittwiter njll
Ayikho isingeniso esifanele, isihloko sekheli leposi ngakho-ke (ngoba iposi = incwadi !!!):
"Mnumzane othandekayo" noma "Madam othandekayo"
5 September 2017 ku-10: 46
« Kuthiwani uma i-nanotechnology ne-intelligence yokufakelwa ibangela ukungafi?
Isinyathelo esisheshayo ku-Romy nase-Savannah icala: amaphoyisa avuleka lapho "i-Savannah itholakala khona" »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.984.950
SalmonInClick op Igciwane le-corona ('i-Wuhan virus') line-patent yesiNgisi: inombolo EP3172319B1
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM op Igciwane le-corona ('i-Wuhan virus') line-patent yesiNgisi: inombolo EP3172319B1